बलात्कारका बेला युवतीले आँखा बन्द गरिन्, अदालतले छाड्यो सामूहिक बलात्कारका दोषी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बलात्कारका बेला युवतीले आँखा बन्द गरिन्, अदालतले छाड्यो सामूहिक बलात्कारका दोषी
मड्रिड। स्पेनका ५ अपिल न्यायाधीशले सामूहिक बलात्कारको एउटा मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको ५ आरोपीलाई जमानतमा छाड्ने विवादित फैसलालाई काम राखेको छ । सामूहिक बलात्कारका यी ५ जना दोषीलाई अब ‘सामूहिक बलात्कार’ नभइ त्योभन्दा कम गम्भीर अपराध ‘यौन उत्पीडन’ को आरोपमा सजाय हुनेछ । स्पेनमा सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई १४ वर्ष जेल सजाय हुन्छ तर यौन उत्पीडनका दोषीलाई ९ वर्ष मात्र जेल सजाय हुन्छ । यी ५ जनालाई पनि ९ वर्षको सजाय सुनाइएको छ ।
तल्लो अदालतले यी ५ जनालाई सामूहिक बलात्कारमा दोषी ठहर नगरी यौन उत्पीडनका दोषी मानेर जमानतमा रिहा गर्ने फैसला गरेपछि यसअघि नै यो मुद्दा निकै विवादित भएको थियो । यस विषयमा थुप्रै विरोध प्रदर्शन भएका थिए । अहिले पनि अपिल न्यायाधीशले तल्लो अदालतको फैसला कायम राख्दै भनेका छन् कि पीडित १८ वर्षकी युवतीमाथि बलात्कार भएको होइन किनकि ती युवतीमाथि यी ५ जनाले हिंसाको प्रयोग गरेका छैनन् । स्पेनको कानुनअनुसार बलात्कार भएको ठहर हुन पीडितमाथि हिंसा, हमला वा धम्कीको प्रयोग भएको हुनुपर्छ ।
फैसलापछि पीडित पक्षका वकिलले आफूलाई यो फैसला मान्य नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने भनेका छन् । सुनुवाइका क्रममा पनि २ न्यायाधीशले उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको मानेका थिए तर ३ न्यायाधीशले यसलाई सामूहिक बलात्कार मानेनन् अतः बहुमतका आधारमा सामूहिक बलात्कार नभइ यौन उत्पीडन मात्र भएको फैसला गरिएको हो । यो घटनापछि स्पेनमा निनकै विवाद भएको छ । यहाँसम्म कि घटनाबाट दुःखी यहाँका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले यस विषयमा नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जुलाइ २०१६ मा घटना भएको थियो । सेन फर्मिङ बुल रनिनङ फेस्टिभलका क्रममा १८ वर्षकी युवतीलाई ५ जनाले बेसमेन्टमा लगेर उनीसँग जबरजस्ती असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाएका थिए । उनीहरुमध्ये केहीले यो घटनाको भिडियो बनाएर ह्वाट्सएप ग्रुल ला मानाडामा शेयर गरेका थिए । यस विषयमा पुलिसले तयार गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ कि पीडित युवतीले घटनाका क्रममा उदासिन रवैया अपनाइन् र बलात्कारको पूरै समय आफ्ना आँखा बन्द गरिरहिन् । अदालतले पनि फैसलामा पीडित युवतीको भूमिका उदास पीडितको जस्तो भएको कुनै किसिमका धम्की वा हिंस्रक गतिविधिको कुनै प्रमाण नभेटिएको भेको छ । युवतीले कुनै शारीरिक विरोध वा प्रतिरोध नगरेकै कारण यो घटना बलात्कारको घटना नमानिएको अदालतले भनेको छ ।